ညို့ငင်အားကောင်းတဲ့မျက်ဝန်းတစ်စုံနဲ့ လိုက်ဖက်တဲ့ nude color နှုတ်ခမ်းလေးတွေ ဖန်တီးကြမယ် | CosmeticMyanmar
Home » Article » ညို့ငင်အားကောင်းတဲ့မျက်ဝန်းတစ်စုံနဲ့ လိုက်ဖက်တဲ့ nude color နှုတ်ခမ်းလေးတွေ ဖန်တီးကြမယ်
ညို့ငင်အားကောင်းတဲ့မျက်ဝန်းတစ်စုံနဲ့ လိုက်ဖက်တဲ့ nude color နှုတ်ခမ်းလေးတွေ ဖန်တီးကြမယ်
ခုနောက်ပိုင်းမှာ နှုတ်ခမ်းနီကို အရောင်ရင့်တာကြီးတွေမဆိုးဘဲ အရောင်နုတဲ့ nude color လေးတွေကိုသဘောတွေ့နေကြပါတယ်။အရာင်အနည်းငယ်ရင့်တဲ့ nude လေးတွေက အသားဖြူတဲ့လူတွေနဲ့ လိုက်ဖက်သလို အရောင်နုလေးတွေက အသားညိုသူတွေနဲ့ လိုက်ဖက်ပါတယ်။ အဲ့လို nude lipstick လေးတွေက Smokey eye လို့ခေါ်တဲ့ look တွေနဲ့ လိုက်ဖက်ပြီးအထာကျပါတယ်။ မျက်ဝန်းနက်တစ်စုံ ရယ် အရာင်ဖျော့ဖျော့ နှုတ်ခမ်းလွှာတစ်ခုက သင့်ကို တောက်ပမှုအမြင့်ဆုံးပေးနိုင်မှာပါ။ ဒါပေမယ့် nude color လေးတွေမဆိုးခင်နှုတ်ခမ်းလေးကို scrub လေးလုပ်ပြီး lip balm လေးခံပြီး မှ ဆိုးပေးပါ။ နှုတ်ခမ်းရဲ့ ပင်ကိုအရောင်ကညိုနေရင်လည်း nude color တွေက အရောင်ထွက်မှန်မှာမဟုတ်လို့ပါ။ Nude color line ကတော့ အရောင်တွေအများကြီးရှိပါတယ်။ လိမ္မော်ရောင်ဘက်သွားတဲ့ nude၊ မိတ်ကပ်ရောင်Nude color လေးတွေ၊ အညိုရောင် စသဖြင့် အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။ မိမိနဲ့လိုက်ဖက်တဲ့အရောင်ကိုမရွေးတတ်လို့လည်း စိတ်မပူပါနဲ့ ။ အသဲတို့ စိတ်ကြိုက်ရွေးနိုင်အောင် ပုံလေးတွေနဲ့ပါ တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
Loving this full #weathercollection look⚡ @nicolconcilio wearing both Eye of the Storm and Calm Before the Storm palettes with Violet Moon Glitter Eyes, Nova Matte Lipstick and Lightning Bolt Ultra Glow Highlighter 💜
A post shared by Kylie Cosmetics (@kyliecosmetics) on Mar 1, 2018 at 11:16am PST
🌕URANUS🌕✨ is launching in justafew days!!!!! It will be available inabundle and sold individually! Who’s ready for this blinding Skin Frost?? ✨ Eclipse will also be returning for everyone who missed it the first time!!! 🔥 Sep. 9th @ 10AM (PST) / 1PM (EST) Photo by: @brandonlundby Hair by: @davedscissorhands Makeup by: #jeffreestar @mannymua733 Outfits by: @balmain
What an angel…😇 The lovely @vjosamua isadivine vision with this shimmery halo eye from our Glam Reflection: Gilded palette. Suchabeauty!💖💖 . . . . . #makeup #makeuplooks #eyemakeup #eyelooks #eyeshadow #eyeshadowpalette #makeuppalette #bhcosmetics
A post shared by BH Cosmetics (@bhcosmetics) on Apr 8, 2018 at 9:31am PDT
⬅SWIPE LEFT and admire this sparkly sensation!💎 Our stunning model isadream come true in this sweet, shimmery eye look from our ALL NEW Diamond Dazzlers collection. These glistening powders addatouch of shimmer to your fave eye effects and light up your look like never before.💖 Available now – shop 🔗 in bio! . Model: @anastasiasupernova MUA: @beautybyangee Hair: @anni_Sepi Photographer: @snapsstudio . . . . . #makeup #newmakeup #makeuplooks #sparklymakeup #shimmerpowders #loosefoilpigment #diamonddazzlers #eyelooks #bhcosmetics
A post shared by BH Cosmetics (@bhcosmetics) on Mar 23, 2018 at 6:03pm PDT
အဆီတွေလည်းကျမယ် ကျစ်ကျစ်လစ်လစ်ဖြစ်သွားစေမယ်ဆိုတဲ့ celluite cupping လေးတွေလာပြီနော်